မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: September 2007
ကချေသည်ရဲ့ ဆံထုံးထက်မှာခွေခွေ ပိုင်ရှင်မဲ့အဖြစ်နဲ့ မြေသြဇာအဖြစ်ပဲနေနေ နံရိုးတချောင်းပဲ ဖြစ်ပါစေ ငါက နင့်ကို ချစ်တယ်.. ..အာဒံနဲ့ ဧ၀ လဲမစားသုံးခဲ့ နှလုံးသားငှက်က ကိုက်ချီယူဆောင်သွားခြင်းလဲမရှိ ပုပ်သိုးသွားတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့လဲ ငါက နင့်ကို ချစ်တယ်.. ..ကာရံတွေမဲ့ကာ ရစ်သမ်တွေချို့တဲ့လို့ သံစဉ်ချိုတွှေမထွက်နိုင်ပဲ အင်္ဂါမစုံတဲ့ တူရိယာတလက်ဖြစ်နေလဲ ငါက နင့်ကို ချစ်နေဆဲ.. ..မှောင်အတိပြီးတဲ့ သန်းခေါင်ယံညတွေထဲ ကြယ်မစုံ အလင်းရောင်နဲ့သာ ရေးဆွဲ အဖြူရောင်သန့်သန့် ပန်းချီကားတချပ်ဖြစ်ခဲ့လဲ ငါက နင့်ကို ချစ်နေမြဲပါ.. .. ဘာမှ မမျှော်လင့်ပါဘူး ချစ်သူ ဖြစ်ချင်ရာသာ နင်ဖြစ်လိုက်ပါ ဒီဘ၀မှာ ငါဆုတောင်းတာ နင်ဟာ..ငါအမြဲ ဖတ်ခွင့်ရှိတဲ့ ပလေတိုးနစ် အချစ်စာမျက်နှာ။
'98 ကတည်းက ရန်ကုန်ရောက်မှ ပေါင်းလာတဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးတွေရှိတယ်။ ခုထိလဲ အဆက်အသွယ်မပြတ်ပဲ အခွင့်အရေးရတာနဲ့ အတူသွားလာ အတူကဲဆဲ။ သူတို့တွေကလဲ မြန်မာဘလော့ဂါ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ပါတ်သက်လာပုံလေး ပြောပြချင်တာ။ အဲဒီထဲက တစ်ယောက်ကလဲ 2007 နှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းက ဘလော့ ဂ်ရေးနေ ပါတယ်တဲ့ ။ ဘလော့ဂါတွေ စုထုတ်ကြမဲ့ စာအုပ်မှာတောင် သူ့စာမူတွေ ပါဦးမယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီသူငယ်ချင်းကိုတော့ အပြင်မှာသိပေမဲ့ ဘလော့ဂါအနေနဲ့ ဘာနာမည်နဲ့ ရေးမှန်း မသိလို့ စဉ်းစားလိုက်ရတာ။ လာထား ဘလော့ဂ်တွေမှာ မွှေနှောက်ရှာဖတ်ရင်း သူ့ရဲ့ “ကိုယ်တိုင်ရေး ပုံမတူ့တတူ”ကိုလဲ တွေ့ပါရဲ့ ။ ဒီရုပ်ကြီးများ ခွေးဒရွတ်တိုက်ဆွဲချီသွားတောင် မှတ်မိပါသေး။ ပြီးတော့ တင်ပြီးသားပို့စ်တခုထဲမှာလဲ ရေးထားသေးတယ် အိမ်ကမိန်းမ မဖတ်ရတဲ့ ။ (လင့်ခ်ထည့်မလို့ ပဲ ခု ရှာတွေ့တော့ဘူး) အဲဒီ သူငယ်ချင်းကြီးကတော့ မျက်လုံး ပါဗျား။ နောက်ထပ် သူငယ်ချင်းမ တစ်ယောက်ကလဲ သူလဲ ရေးချင်ပါသတဲ့ ။ စီမီနာမှာတုန်းကတော့ မလာခဲ့ပါဘူး။ လာမယ်ပြောပြီး ပုံပြောနေကြမလို့ တော့ စိတ်မဆိုးဘူး။ လောလောဆယ် ချင်ကာပူ သွားလည်နေလို့ ပြန်လာမှပဲ အသည်းအသန် လုပ်ခိုင်းမှပဲ လုပ်ပေးရဦးမယ်။ သူငယ်ချင်း နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မျက်လုံး ရဲ့ အကူအညီနဲ့ လုပ်ပြီးသွားလို့ သူ့ရဲ့ ကြာကြာဖတ်ရင် မျက်စိညောင်းမဲ့ ပို့စ်တွေကို အင်တိုက်အားတိုက် တင်နေလေရဲ့။ ပြီးတော့ သူများပို့စ်ထဲမှာလဲ ကွန့်မန့် ရေးသွားသေးသတဲ့။ ပီကေ said... သွေးကတော့ AB ပဲ။အတော်မှန်တယ်။ သွေထွက်သံယိုပဲ။ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ အူတူတူ အထဲကဆိုတာကိုတော့ အတော်လက်ခံရခက်သား။ ကိုယ့်ဖာသာကို မေးတာထက် အတွင်းသိ အဆင်းသိကိုပဲ မေးတာကောင်းပါတယ်။ ပီကေဆိုတဲ့ကောင် တကယ်ပဲ အူသလားဟင်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းက ပီကေ ပါဗျာ။ အဟိ ပြောရမှာတော့ အားနာလို့ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတင်ထားတဲ့ ပို့စ်လေး ရှိပါတယ်။ “ပြောပါများ စကားရ” တဲ့ ။ အဲဒီထဲက “တပည့် ၊ တရားခံ တို့ မောင်မဲ” တို့ က သူ့ ကိုယ်စားပြုလို့ တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းက အူတူတူ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အူကြောင်ကြောင်ပါပဲ။ သွားပြီး ဖတ်ရှုဝေဖန်ပေးကြပါဦးနော်။ စာကြွင်း။ ။ သယ်ရင်းရေ ချစ်လို့ ချတာ ချိတ်ချိုးရ၀ူးနော်..
သင့်ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားကဖေါ်ထုတ်ပြသော သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး သွေးအုပ်စု “အို” ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုသူ၊ တခုခုကို လိုချင်လို့ တွေ့တိုင်း ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မရောက်မချင်း အသည်းအသန်ကြိုးစားကာ ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရယူလိုသူ၊ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်သူ၊ သစ္စာရှိသူ၊ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန် လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသူ ဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်မှာ ပလွှားဝင့်ဝါတတ်ခြင်း၊ မနာလိုစိတ်ရှိခြင်းနှင့် အပြိုင်အဆိုင်များမှု ဘက်သို့ ယိမ်းယိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သွေးအုပ်စု “အေ” ဟာမိုနီ(ဆီလျော်ညီညွတ်ခြင်း)၊ ငြိမ်းချင်းခြင်း နှင့် အုပ်စုဖွဲ့နေရခြင်းကို နှစ်သက်သူ ဖြစ်သည်။ တခြားသူအများနှင့် ကောင်းစွာ အတူတွဲလုပ်ကိုင်တတ်၍ ထိခိုက်ခံစားလွယ်တတ်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်ခြင်းများရှိသူ။ အားနည်းချက်များမှာ ခေါင်းမာခြင်းနှင့် အနားယူ၍ပင်ပန်းမှုပြေလျော့စေခြင်းအတွက် မတတ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သွေးအုပ်စု “ဘီ” ကြမ်းတမ်းခက်မာသော တသီးပုဂ္ဂလဖြစ်သူ၊ ပွင့်လင်း၍ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး မိမိ ခံယူချက်အတိုင်း နေထိုင်ရန် နှစ်သက်သူ၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသူ၊ ပျောင်းညွတ်လွယ်သူဖြစ်၍ မည်သည့် အခြေအနေမဆို လွယ်ကူစွာ လိုက်လျောညီထွေကူးပြောင်းနိုင်သူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် လွတ်လပ်မှုရှိခြင်းအပေါ် စွဲမြဲစွာ ပြောဆိုမှုသည် တခါတရံ ဝေးကွာစေပြီး အားနည်းချက်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သွေးအုပ်စု “အေဘီ” အေးဆေးသူ၊ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ချုပ်တည်းနိုင်စွမ်းရှိသူ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ကောင်းစွာ နှစ်လိုဖွယ်ရှိသူ၊ လူအများကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေသူ ဖြစ်သည်။ နေရာတကျ ပြုလုပ်တတ်သည့် ပင်ကိုယ်ဥာဏ်ရှိ၍ တရားမျှတသူဖြစ်ပြီး သဘာဝကျသော ဖြေဖျော်သူ လည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် စိတ်ခံစားမှု ကင်းမဲ့ကာ မထက်မြက်သော ထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ခက်ခဲတတ်သူလည်းဖြစ်သည်။ ကျမကတော့ ဘီသွေး အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀တည်းက တသီးပုဂ္ဂလနေရမှာ သေမတတ်ကြောက်သူဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့် အချက်များတော့ မှန်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ မည်သည့် အခြေအနေမဆို လွယ်ကူစွာ လိုက်လျောညီထွေကူးပြောင်းနိုင်သူဖြစ်ကာ ရောက်သည့် အရပ် ပျော်တတ်၍ “ရွက်ကျပင်ပေါက်” ဟုတောင် သူငယ်ချင်းများက ခေါ်ဝေါ် စနောက်လေ့ ရှိကြသည်။ သို့သော် ကျမ မန်းလေးသူ ဖြစ်တာ မြန်မာက ဖြစ်တာ အမြဲတမ်း ဂုဏ်ယူပါသည်။ အရိုးကိုတော့ အရွက်အဖုံးခံမည့်သူ မဟုတ်ကြောင်း တိုက်ဆိုင်တုန်း ပြောပါရစေ။ လွတ်လပ်မှုရှိခြင်းကိုတော့ အင်မတန် နှစ်သက်ပါသည်။ ဘောင်ခတ်ခံရခြင်းကို အင်မတန် မုန်းပါသည်။ သင်ရော? သင်၏သွေး အမျိုးအစားက ဘယ်အုပ်စုမှာပါဝင်ပါသလဲ။အထက်ပါ ဖေါ်ထုတ်မှုသည် သင်၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ကိုက်ညီပါသလား ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာပါပြီး ဓာတ်ပုံဘလော့ဂ်လုပ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းလေး (၃) ယောက်ရှိတယ်။• ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံဘလော့• ကိုစိုးဇေယျရဲ့ ဓာတ်ပုံဘလော့• ကိုသန့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံဘလော့သူတို့နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဓာတ်ပုံမူပိုင်ခွင့်ကိစ္စလေးကို စဉ်းစားကြည့်ဖူးတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီမှာ ဖတ်မိတော့ သူတို့ ရယ် တခြားစိတ်ဝင်စားသူ တွေရယ်ကို ဝေမျှချင်လို့ ဒီပို့စ်လေးတင်လိုက်တာပါ။ ဓာတ်ပုံမူပိုင်ခွင့် သဘောတူညီချက် ချုပ်ဆိုရာတွင် ပါဝင်သင့် သောအချက်များ ၁။ အသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက် ၂။ အသုံးပြုမည့် ကာလ ၃။ အသုံးပြုမည့် အကြိမ် ၄။ ပညာရှင်အမည်ကို ဖေါ်ပြခွင့် ၅။ မူလကိစ္စမှ ပြောင်းလဲလျှင် ခွင့်ပြု၊ မပြု ၆။ အကြိမ်အရေအတွက်ပြောင်းလဲလျှင် ခွင့်ပြု၊ မပြု ၇။ ရပိုင်ခွင့် ရှိသူ၏ ရပိုင်ခွင့်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖေါ်ပြရန် ဓါတ်ပုံမူပိုင်ခွင့်နှင့် အကျုံးဝင်သော ဓာတ်ပုံများ ၁။ အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံများ ၂။ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများ ၃။ ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံများ ၄။ စတူဒီယို အလှဓာတ်ပုံများ ၅။ စီးပွားရေး ကြော်ငြာ ဓာတ်ပုံများ ၆။ ပြက္ခဒိန်နှင့် ပိုစတာ ဓာတ်ပုံများ ၇။ စာအုပ်ထုတ်ဝေရန် ရည်ရွယ်၍ ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများ ၈။ သတင်းဓာတ်ပုံများ ၉။ သတ်မှတ် သက်တမ်းထက် မကျော်သေးသော ဓာတ်ပုံများ (မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဓာတ်ပုံမူပိုင်ခွင့် သက်တမ်းမှာ စတင်ရိုက်ကူးချိန်မှစ၍ နှစ်၅၀) မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်ပုံအသင်း အတွင်းရေးမှူး ကိုဟန်မင်းဦးကတော့ ရွှေတောင်တန်း အောက်လမ်း၊ အမှတ် 20 ၊ မြေညီထပ်မှာ Best Photo Art Galary and Studio ဆိုပြီး ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်က- 227199 ပါ။ သိချင်တာတွေရှိရင် ဆက်သွယ်လို့ ရအောင်နော်။ဓါတ်ပုံ ၀ါသနာရှင်များအတွက် Photographic Enthusiasts Group Forum ကို http://pegroup.dailyforum.net မှာ စီစဉ်ပေးထားကြောင်းပါ ခင်ဗျားတဲ့ ဆီဗုံးကနေ တဆင့်ရလာတဲ့ message လေးပါ။ fotobuddy ရေ သိုင်းကြူးနော်
ယနေ့သည် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဖြစ်သည်ဟု ပြောနိုင်သူသာ အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်သူဖြစ်ပါသည်။အဟိ ကျမကတော့ တပတ်ကို ၆ရက် အလုပ်လုပ်၊ လိုအပ်ရင် ကိစ္စပေါ်ရင် ၇ရက်လုံး အလုပ်လုပ်။ ဒီဘ၀က ဘယ်တော့များမှ လွတ်နိုင်ပါ့ အရင်တုန်းကထက် စိတ်ထားတွေ သဘောထားတွေ အသိဥာဏ်တွေ သာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် လုပ်နေတာကိုက ကိုယ့် ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ကိုယ်ဖြည့်ဆည်းနေခြင်း တဲ့အဲဒါက physically needs တွေအရင်ပြည့် စုံနေပြီးမှ နောက်တဆင့် ဖြည့်ဆည်းခြင်း ဖြစ်မလား မသိဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ထမင်းဝအောင် ဗိုက်အရင်ဖြည့် ဖို့ မနည်းကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတုန်းပါပဲ။ကြီးကျယ်သော လုပ်ရပ်များကို စွမ်းအားနှင့် လုပ်ကိုင်သည်မဟုတ်၊ ဇွဲနှင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည် တဲ့။အဲတော့ ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ် ၁% အမှန်တရားမြတ်နိုးသူတွေ ၁၀၀%ပြည့် ဖွေးဖွေးမလှုပ်ခင် ရှိထားတဲ့ အင်အားစုလေးနဲ့ ဇွဲနှင့် လုပ်ကိုင် အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ပဲလိုတာကို စဉ်းစားမိတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတ္တိရှိမရှိ အကြီးမားဆုံး စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းသည် စိတ်ဓါတ်မကျပဲ ရှုံးနိမ့်မှုကို ခံနိုင်စွမ်းရည် ရှိမရှိကို စစ်ဆေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကဲ Never never give up! နော်။ လဲကျသွားတိုင်း ပြန်ထကြမယ်။ အထုအထောင်းခံရလေ တောက်ပတဲ့ စိန်ပွင့်တွေ ဖြစ်လာမယ်။ (ကာဗွန်ချင်း အတူတူ မီးသွေး မလုပ်ပဲ စိန်ဖြစ်ကြမယ်။)တန်ဖိုး၊ သော့ချက်၊ လျှို့ဝှက်ချက် နှင့် ဖြေဆေးထာဝရ နိုးကြားတက်ကြွနေခြင်းဟာ လွတ်လပ်မှုရဲ့ တန်ဖိုးပါ တဲ့နှိမ့်ချခြင်းကတော့ လျင်မြန်သော အောင်မြင်မှုအတွက် သော့ချက်ပျော်ရွှင်ခြင်း၏ အကောင်းဆုံး လျှို့ဝှက်ချက်မှာ စွန့် လွှတ်ခြင်းဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၏ အကောင်းဆုံး ဖြေဆေးမှာ အလုပ်လုပ်ခြင်း
“မောင်”…ဗြောင် ခေါ်ချင်ပေမဲ့လဲယောင်လို့တောင် အခွင့်အရေးမရှိလို့လက်မှိုင်ချ ငေးမောနေသူပါ..မိုးလင်းကမိုးချုပ် အလုပ်များစွာရှုပ်လို့လှုပ်မရတဲ့ လက်ရှိဘ၀မှာအသက်၀၀ ရှုလို့ မရရင်လဲမောင့် မျက်နှာ တ၀ကြည့်ဖို့ အရေးရောက်ရာအရပ်က အပြေးလာချင်သူပါ..တွေ့နေမြင်နေရခိုက်ဘ၀အမောတွေ ဘယ်လိုရိုက်ရိုက်လောကဓံ အမိုက်မှောင်ကိုလဲကြိုက်သယောင်ယောင် ထင်နေသူပါ..အဖေါ်အဖွဲ့တွေကြားမှာတမင်တကာ အပျော်သဘောနဲ့ရယ်ကာမောနေလည်းအကြင်နာမှော်ရုံတောက ပြေးရသူမှာနာကျင်ကာလဲ မောနေဆဲပါ..နိုးတ၀က် အိပ်ပျက်ခြင်းများစွာနဲ့ခံစားချက်တွေ အုံကြွနေတဲ့နှလုံးသားရပ်ဝန်းတခုရဲ့ ညနက်သန်းခေါင်အတွက်ဒီလက်တွေကလဲကဗျာတွေပဲ ဆက်သချင်သေးသတဲ့… …သိတတ်တဲ့ ဦးဏှောက်မှာတော့သံ.ဇ.ကာ. ခတ်ခိုင်မာတဲ့ ကြိုးတမျှင်ကတော့အ.ခါ.ခါ.အ.ထပ်.ထပ်. ရစ်ပတ်တစတစနဲ့ မွန်းကျပ်လာတဲ့ ဒီအသည်းနှစ်ခါမကွဲအောင်..မရှိတာပဲ ကောင်းပါမယ်။
UK ကသူငယ်ချင်းဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်မေမေ မနေ့က ဆုံးသွားတယ်သူခံစားနေမှာ အတွက်လဲ ထပ်တူတွေးပူပြီး ၀မ်းနည်းနေမိတယ်။ မိုးကုတ်က တပည့် ဘလော့ဂါတစ်ယောက်လဲ လူခေါ်မေးခံရ၊ စက်တွေ အသိမ်းခံရနဲ့ (ကောလဟာလမှာ) အထိန်းသိမ်းခံရသလိုလိုတောင် ကြားမိတော့ စိတ်ပူ ၀မ်းနည်းရပြန်ရော။ အခြေအနေပြည့်စုံရက်နဲ့ အထီးကျန်နေတဲ့ ရန်ကုန်က မွေးစားညီမလေး ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကိုလဲ ဘယ်လိုမှမအားလို့ အားပေးနှစ်သိမ့် မှုတွေ မလုပ်နိုင်တော့လဲ သူမလေး ၀မ်းနည်းအားငယ်နေမှာလား ဆိုတာကို တွေးပူ စိုးရိမ်နေမိပြန်ရော။စီမီနာအတွက်နဲ့ တက်ခဲ့တဲ့ သင်တန်းအတွက်လဲ ကုန်ကျစရိတ်တွေများသွားလို့ ပိုက်ပိုက် မကျန်သလောက်ဖြစ်သွားတာလဲ စိတ်ညစ်နေရပြန်တယ်။ (ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲ သနားလို့) စီမီနာအတွက် live show blog အမှတ်တရ တင်ထားတာမှာလဲ အမည်လိမ်၊ အမည်မဖေါ်ပဲ အဆဲခံရလားခံရလို့ ရင်နာစရာကောင်းပါသေးသတဲ့။ ဒီဘလော့ ဂ်စီမီနာကြီးလုပ်ခဲ့လို့ ဘလော့ဂါတွေ အကျိုးထိခိုက်သလိုလို (ဘန်းခံရတာတို့ ခေါ်ယူမေးမြန်းခံရတာတို့ စသဖြင့် ) ကောလဟာလတွေနဲ့ အပြစ်တင်တာ ကွိကွ ဖြစ်ကာ သွေးခွဲချင်တာတွေကြောင့်လဲ စိတ်ရှုပ်မိပြန်ရဲ့။ မပန်ကတော့ပြောပါတယ်.. ပြီးခဲ့တာတွေ မှားလားမှန်လား တွေးတောပူပန်နောင်တရဖို့ အချိန်မရှိပါ. ရှေ့ဆက်ရဦးမယ် ငါတို့ ဆက်ချစ်ကြမယ်.. တဲ့ ။ လူတွေက နားလည်ကြပါတယ် ပြည်ပဘလော့ဂါတချို့နဲ့ ပြောဖြစ်တယ် သူတို့နားလည်တယ် လုံးဝ အပြစ်မတင်ပါ. ကိုယ့်ချင်းချင်းကို ပြေလည်အောင်နေပြီး နှစ်သိမ့်ရမှာ။ အကျိုးအပြစ်ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲ.. အပြစ်တင်တွေးတော နောင်တရဖို့ အချိန်မရှိပါ.. ဆက်လုပ်ဖို့တောင် စဉ်းစားဖို့ အချိန်ကမလောက်ရတဲ့အထဲ.. ဂရုမစိုက်နဲ့သိလား တဲ့။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီလိုအားပေးတာ ကျေးဇူးကုဋေပါဗျာ။ P.S: ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး လက်ရှိဖြစ်နေတာလေးကို ညည်းချင် စိတ်ပေါက်လာလို့ပါဗျာ။
တေဇာ့ ဆီကရတာ။ လိုချင်ရင် get this flashအရောင်အသွေးစုံလင် ပန်းမွေ့ယာတောတွင် ဖူးရာကငုံ၊ ငုံရာကပွင့် ငါလဲ ပန်းတစ်ပွင့် ဖြစ်ခဲ့တယ်.. အဖူးအငုံဘ၀ မြူမှုန်မျှမတင် အပြစ်ကင်းစင် ချစ်ခြင်းသင်ဖို့ စောသေးတယ်.. ပန်းတို့ဘ၀ အပင်ပေါ်မှာ လှထူး ပျိုးခဲ့ ဥယျာဉ်မှူး ခူးဖို့မပြင် ကြည်နူးအစဉ်.. ငုံရာကပွင့် လှဂုဏ်တင့်လို့ ရနံ့လည်းဝေတော့ ခြွေမဲ့ မုဆိုးများလှတယ်.. ပန်းဆိုတာက ၀တ်ရည်စုပ်ခံ ပျားပိတုန်းဒဏ်လည်း ခံနိုင်သမျှ ခံရလေတယ်.. ပျော်တုန်းမော်တုန်း ငွားငွားစွင့်စွင့် ပွင့်နေတုန်း ပန်းမုဆိုးနဲ့ တိုးချင်တိုးတော့ အငြိုးကံကြမ္မာ ခေလှတယ်.. သို့မဟုတ်ပြန်လည်း မဆွတ်ခင်က ညွတ်ချင်စိတ်နဲ့ သခင့်လက်တွင်း သက်ဆင်းတယ်.. ရာသီကုန်အောင် ဝေလည်းဝေပြီး ပန်းတပွင့် တာဝန် ကျေပွန်ပြီးတော့ လေအဝေ့မှာ ကြွေရတယ်.. ပန်းတစ်ပွင့် ပုံပြင် သည်မျှကွယ်… Gepostet von
စင်ကာပူ Temasek Polytechnic ကနေ Initiative For ASEAN Integration အနေနဲ့ လာရောက်ဖွင့် လှစ်သင်ကြားပေးတဲ့ Destination Development and Marketing Course ကို မြန်မာ-စင်ကာပူ သင်တန်းကျောင်းမှာ 27th Aug-7th Sep အထိ နှစ်ပါတ်တာ သွားရောက် သင်ကြားဖြစ်ခဲ့တာ မနေ့က သောကြာနေ့ ဟာဆိုရင် နောက်ဆုံးရက်ပါ။ ဒါက သင်တန်းကသူတွေနဲ့ အတူ လာသင်ပေးတဲ့ ဒုတိယအပါတ်ရဲ့ ဆရာနဲ့ သင်တန်းကျောင်းရှေ့မှာ အမှတ်တရ ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ပုံပါ။ သင်တန်းမှာ ခရီးသွားလာရေးကုမ္ပဏီကသူတွေရယ်၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးဝန်ကြီးဌာနက သူတွေရယ်၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကသူတွေရယ်ဆိုပြီး အားလုံး အယောက် ၃၀ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ အလွယ်တကူ ရင်းနှီးမှု ထုံးစံအတိုင်းကတော့ အားလုံး ရင်းနှီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အတူတကွ လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ UMTA၊ MHA နဲ့ MTT ကနေ ရွေးချယ်လွှတ်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပြီးမှ ရတဲ့ quota အရေအတွက်နဲ့ ပြန်လည်စီစစ် ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ တခြားသင်တန်းအမျိုးအစားတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ လေ့လာချင်သေးရင် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။သင်ခန်းစာတွေက ခက်လွန်းတာရယ်တော့ မရှိပေမဲ့ နေ့တဓူဝ projects တွေ presentations တွေနဲ့ မလို့ တော့ နဲနဲ ပင်ပန်းပါတယ်။ သင်တန်းချိန်ပြီးရင်လဲ ရုံးကိုပြန်ပြီး ည 7နာရီကျော် 8နာရီထိ အလုပ်ဆက်လုပ်ရသေးတာမလို့ တကယ်ပဲ မလှုပ်သာတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သင်တန်းမှာသင်ရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကနေ အလုပ်အတွက်ရော personal အတွက်ပါ ရလိုက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက များပါတယ်။ သင်တန်းပြီးတော့လဲ ပေးတဲ့ certificate အတွက် မက်မောစရာရှိသလို သင်တန်းချိန်အတွင်းက team works တွေနဲ့ အတူ ရရှိခဲ့တဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကလဲ ကိုယ့်ရဲ့ social network(ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု လူမှုရေးနယ်ပယ်)ကို ကျယ်ပြန့်စေပြီး ဆက်စပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်က သူတွေမလို့ ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေကို ဦးတည်စေပါတယ်။ သင်တန်းကြောင့်တော့ ရာထူးတက်တာရယ်တော့ မရှိသေးပေမဲ့ လက်တွေ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင် အင်မတန် အကျိုးထူးတွေရပါတယ်။ သင်တန်းလာပေးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ သင်ကြားမှုပုံစံက multimedia learning(with projector, Video showing, PowerPoint presentation) နဲ့ brain storming with group discussion ကို သူတို့ Singapore မှာ သင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း အခြေခံတာမလို့ ခုမှ ဒီလိုသင်တန်းမျိုး တက်ဖူးသူတွေအတွက်တော့ မြန်မာက အခြေခံပညာရေးစနစ်နဲ့ တော်တော်ဟနေလို့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ တော်တော် ကြိုးစားကြရပါတယ်။ ဒီသင်တန်းမှာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား International certificate, Diploma တွေအတွက် တက်ရတဲ့ သင်တန်းတွေလဲ ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြပါ။ သင်တန်းကြေးမပေးရပေမဲ့လဲ သင်တန်းအသွားအပြန် တက္ကစီခ နဲ့ နေ့လည်စာရယ် သင်တန်းမှာ field trip ထွက်တာ fare well အနေနဲ့ လုပ်တာတွေအတွက်ကတော့ ကုန်ကျတာတွေရှိလို့ လခ တ၀က်လောက်ပြုတ်သွားပါတယ်။ :Pသင်တန်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ Why do we blog? စီမီနာအတွက် ပြင်ဆင်စရာတွေရှိလို့ သင်တန်းနဲ့ ရုံးနဲ့ service + နဲ့ ဟိုကူးဒီကူး သွားရတာလဲ ပါပါတယ်။သင်တန်းကသူအားလုံး စီမီနာကိုမလာအားပေမဲ့ တ၀က်လောက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွေ လုပ်ဖို့လို့ စိတ်အားထက်သန် နေကြပါတယ်။ (လုပ်ပေးခဲ့လိုက်ရတာ လက်တောင်မလည်လိုက်ဘူး အဟိ) သင်တန်းမှာ ရခဲ့ တဲ့ ဗဟုသုတတွေနဲ့ ပါတ်သက်တာတော့ အချိန်ရရင် နောက်ထပ် ပို့စ်တခုအနေနဲ့ တင်ချင်ပါသေးတယ်။ ခုတော့ ရုံးအလုပ်တွေ မနားတမ်း လုပ်လိုက်ဦးမယ်ဗျို…. :D